Ungasikhulula njani isithuba kwi-iCloud | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | software, Tutorials
Kule minyaka idlulileyo, indawo yokugcina efini iyeyona nto iphambili kubo bonke abasebenzisi abadinga, ewe okanye ewe, ukuhlala benazo iifayile zabo ngalo lonke ixesha. Okwangoku sinezinto ezininzi esinazo zokugcina Basinika isixa se-GB simahla.
Kuzo zonke iinkonzo esinazo, iGoogle Drayivu yeyona inesisa kuzo zonke nge-15 GB yasimahla ngelixa iMicrosoft's OneDrive kunye neApple's iCloud zezona zinqabileyo. Nangona kuyinyani ukuba zininzi iinkonzo zokugcina, ezinxulunyaniswe nomenzi wesoftware zezi zintathu kuphela. Ukuba uneengxaki ngokugcinwa kwelifu lika-Apple, siza kukubonisa apha ngezantsi indlela yokukhulula indawo kwi-iCloud.
Wonke umsebenzisi one-akhawunti enxulumene neenkonzo ze-Apple, unendawo yakhe eyi-5 GB yendawo ekhululekileyo yokugcina iikopi zokulondolozwa kweetheminali zabo kunye nedatha ye-ajenda yabo, ikhalenda, useto lwezixhobo kunye nenye into encinci, njengoko asinandawo yokugcina ikopi yazo zonke iifoto esiyenza ngesixhobo sethu.
Kodwa, ukuba ngaphandle kokuqesha indawo yokugcina kwilifu le-Apple, uyabona ukuba indawo ekuhlalwa kuyo yidatha yakho iqhubeka isanda kaninzi, ngaphandle kweefoto okanye ividiyo oyithathayo ukuba ibe sisizathu, siya Hlalutya ukuba zeziphi izizathu ezingunobangela wazo, yintoni kanye kanye kunye nendlela esinokuvula ngayo indawo.
1 Yintoni egcinwa yi-iCloud
2 Ndingasikhulula njani isithuba kwi-iCloud
2.1 Cima i-backups
2.2 Cima iifoto kunye neevidiyo kwi-iCloud
2.3 Ukuqesha indawo yokugcina
Yintoni egcinwa yi-iCloud
ICloud ayisivumeli kuphela ukuba sigcine idatha kwi-ajenda yethu, ikhalenda kunye noseto lwesixhobo (eyayizalelwe yona ngokwenyani), kodwa, njengokuba iminyaka idlulile, kwaye iinkonzo ezibonelelwa yiApple zanda, ziye zandiswa, ukuze indawo ekhoyo, i-5 GB (efanayo nasekuqaleni) isekhona iyahlekisa.
Idatha egcinwa yi-iCloud namhlanje zezi:
Iifoto (ukuba olu khetho senziwe lwasebenza)
I-imeyile evela kwiakhawunti yethu ye-iCloud
Iibhukhimakhi zeSafari kunye nembali
Umsebenzi we-iCloud awuphelelanga ekugcineni ikopi yedatha yethu yonke efini, kodwa nayo ikhathalela ukungqamanisa yonke idatha kuzo zonke izixhobo ezinxulumene ne-ID efanayo ye-Apple. Ngale ndlela, ukuba sidibanisa umfowunelwa omtsha kwi-iPhone, emva kwemizuzwana embalwa, iyakuvela nakwi-iPad yethu nakwiMac.Uko kwenzeka xa sihlela okanye sidibanisa umfowunelwa omtsha kwi-iPad yethu okanye kwi-Mac, umfowunelwa omtsha Imizuzwana embalwa kamva iya kufumaneka kwi-iPhone.
Le ndlela yokusebenza ikwafumaneka kwikhalenda, izikhumbuzo, amanqaku, imiyalezo, ii-bookmark ze-Safari, i-keychain ... Njengoko sibona, inkonzo ye-iCloud enxulunyaniswa nezixhobo ze-Apple ingaphezulu nje kogcino lwedatha kwizixhobo zethu. Ngaphandle koko, nayo ivumela ukuba silawule isixhobo sethu kude ukuba ilahlekile okanye ibiwe ngokusebenzisa i-iPhone / i-iPad.
Ndingasikhulula njani isithuba kwi-iCloud
Ukuba asinazo iiFoto kwibhokisi ye-iCloud eyenziwe yasebenza, ngokuqinisekileyo kuya kuba njalo Inkonzo ethathe esona sithuba kwiakhawunti yethu kuba kulapho yonke imvelaphi yeefoto kunye neevidiyo esizenzayo ngesixhobo sethu zigcinwa, sishiya ikopi encinci (singayibiza ngokuba yi-thumbnail) yazo zombini iifoto kunye neevidiyo ezikwesi sixhobo.
Ukuba sifuna ukufikelela kuzo kwisixhobo sethu, kufuneka siye kwi-reel kwaye siyijonge ngendlela esiqhele ukwenza ngayo, kuba kwi-intanethi ifoto izakukhutshelwa ngokuzenzekelayo kwaye ukuba yividiyo, iya kuqala ukudlala ukusasaza kwiiseva ezivela kwiApple. Ukuba sifuna ukukhulula indawo esinayo nge-iCloud, Sinezinto ezahlukeneyo esinokukhetha kuzo ukuba sinazo iinkcukacha ezingezantsi:
I-Apple yenza ukuba ifumaneke kuthi ngaphakathi kukhetho esinika lona nge-iCloud, ukubanakho ukwenza ikopi yogcino nge-iCloud yedatha yesiphelo sethu njengeeakhawunti, amaxwebhu, ukumiselwa kwesicelo seKhaya kunye noseto lwesiphelo sethu. Ukuba i-terminal yethu igcina ulwazi oluninzi, isithuba esinokuhlala kwiakhawunti yethu ye-iCloud sinokuphakama kakhulu. Kwakhona, ukuba sinesixhobo esingaphezulu kwesinye kwaye bonke banesipele, indawo ekuhlalwa kuyo iyothusa.
Ukuba ufuna ukukhulula indawo ye-iCloud, unga khubaza ezi backups kwaye uzenze nge iTunes, ukwenzela ukuba iikopi zingahlali kwisithuba osingene ngesivumelwano kwi-iCloud. Ukungancedi esikuziswayo kukuba ukhuphelo kwi-iCloud yesiphelo sethu lwenziwa rhoqo ebusuku ngelixa sihlawulisa izixhobo zethu, ke kuya kufuneka sisebenze ngokufanayo ubusuku ngabunye ngeTunes, into enabasebenzisi abambalwa abazimiseleyo ukuyenza.
Cima iifoto kunye neevidiyo kwi-iCloud
Isithuba esihlala kuzo zombini iifoto kunye nevidiyo ezigcinwe kwiakhawunti yethu ye-iCloud Zezona zihleli kakhulu. Ukuba sinesicwangciso sokugcina isivumelwano kwaye asifuni ukusandisa, isisombululo sokubuyisa indawo yasimahla kukwenza ikopi yogcino lwayo yonke imifanekiso kunye nevidiyo esizigcinileyo kwi-hard drive yethu kwaye sizicime kwi-ICloud, ukuze ukufumana indawo ngaphandle kokuqesha indawo yokugcina engaphezulu.
Ukuqesha indawo yokugcina
Kwiminyaka yakutshanje, ixabiso leenkonzo zokugcina yehle kakhulu kwaye namhlanje sinazo i-50 GB ye-iCloud nge-0,99 euro / ngenyanga kuphela. Ukuba sifuna indawo engaphezulu yokugcina, sinayo i-200 GB nge-2,99 euro / s okanye i-2 TB nge-9,99 euro / ngenyanga.
Ukuba singabasebenzisi bezixhobo ezininzi zeApple, olona khetho lufanelekileyo esinokuzisebenzisa kukubonga ngokudityaniswa okusinika yonke i-ecosystem. Ukongeza, amaxabiso aphantse afane nalawo anikezelwa zezinye iindlela, nokuba yiGoogle Drayivu, iDropbox okanye i-OneDrive.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Ungayikhulula njani indawo kwi-iCloud
Uyikhetha njani ithebhulethi